IJabra Elite 85t entsha yongeza ukurhoxiswa kwengxolo, uyilo, ukuzimela kunye nesandi esikhohlakeleyo | Ndisuka mac
IJabra Elite 85t entsha yongeza ukurhoxiswa kwengxolo, uyilo, ukuzimela kunye nesandi esikhohlakeleyo
Namhlanje ii-headphone ezingenazingcingo zizinto ezifunekayo kwizigidi zabantu. Okwethutyana elidlulileyo, bambalwa abakholelwa ukuba ezi ntloko ziya kuphumelela xa zijongana nomgangatho wesandi kunye nokuzahlula okunokubonelelwa zii-headphone ezingaphaya kwendlebe, kodwa ekuhambeni kwexesha oku kutshintshile ngenxa yee-headphone ezincinci ezinje ngezo. Indlebe enika umdla umgangatho weaudiyo, ukuphatheka kunye nokukhetha ukurhoxisa ingxolo okwethutyana.
Kucacile ukuba ayingabo bonke abasebenzisi abaziva bekhululekile ngolu hlobo lwentloko oluhleli endlebeni, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo umgangatho wazo uqhubele phambili kangangokuba namhlanje unxibile kwaye awuyiqondi ... Abanye benu utyikityo lweJabra luyaziwa kwaye kule meko sinethuba lokuvavanya Intloko entsha yeJabra Elite 85t engenazingcingo.
Thenga iJabra Elite 85t yakho apha
1 Uyilo olutsha lweJabra Elite 85t kunye nomgangatho wezinto ezinomda kwinto egqwesileyo
2 Ukucinywa kwengxolo esebenzayo (i-ANC) kunye ne-HearThrough
3 Umgangatho wesandi kwezi Jabra awunakuphikiswa
4 Imibala, uluhlu kunye nexabiso leJabra Elite 85t
Uyilo olutsha lweJabra Elite 85t kunye nomgangatho wezinto ezinomda kwinto egqwesileyo
Ngale ndlela, xa sijonga ii-headphone ezingenazingcingo kufuneka sijonge kwibhokisi yabo yokutshaja, uyilo lwangaphandle lwakuba nje lukhona, ukuxhathisa kwezixhobo ngokuchasene nokuhla ngengozi okunokwenzeka, ukongeza kumgangatho weaudiyo kunjalo. Siza kuthetha kamva malunga nesandi kwaye kukuba namhlanje ngezicelo ezibonelelwa ngabavelisi bee-headphone ezisezindlebeni ungazisebenzisa kakhulu.
Malunga noyilo lwezi Jabra Elite 85t akukho nto imbi esinokuyithetha. Ubume abanabo buvumela ukubambelela phantse ngokugqibeleleyo kubantu abaninzi, bayile kakuhle ukubonakala kunye nokuxinana kusivumela ukuba sizise naphina ngaphandle kwengxaki.
Umgangatho wezinto ezivela kuzo ezi ntloko zeJabra zenziwe zangqinelana ngokugqwesileyo. Asinako ukukhalaza ngayo nantoni na, zibonisa umgangatho kuyilo kodwa ngaphezulu kwako konke kwizixhobo kwaye oku kusenza sibe nee-headphone ixesha elide.
Ukucinywa kwengxolo esebenzayo (i-ANC) kunye ne-HearThrough
Kule meko, i-Elite 85t inikezela ngokuCinywa kokuSasazeka okuSebenzayo okusebenzayo (ANC) okwaziyo ukuthintela ingxolo yangaphandle ngendlela engazange yabonwa ngaphambili. Singatsho ukuba Kule ngxolo yokurhoxiswa kwe-Elite 85 bakubude be-Apple's AirPods Pro ngaphandle koloyiko okoko nangombulelo kwisicelo esinokongeza inqanaba lokurhoxisa ukungcamla. Oku kufezekiswa ngamanqanaba ahlukeneyo okurhoxiswa kwengxolo kunye ne-HearThrough.
I-HearThrough, ligama elisetyenziswe yinkampani ukuchonga indlela yokubonakala. Ngale ndlela, akukho nto ingako inokuchazwa okoko, kunye nokucinywa kwengxolo, yomibini imisebenzi isinceda ukuba sibe kwinqanaba elifanelekileyo lokuzahlula ngaphandle ngelixa simamele incoko enokubakho naye nabani na.
Iinjineli zeJabra zikhulise ngokukodwa amanqanaba esandi ali-11 ukuzisa ukusebenza ngokukuko. Inqanaba ngalinye (ukusuka kwi-ANC epheleleyo ukuya kwi-HearThrough epheleleyo, kunye nesithoba eshiyekileyo), yahlukile kwinqanaba langaphambili nasemva kwayo malunga ne-3 db, enika utshintsho olubonakalayo ngokutsiba ngalunye. Ngona nqanaba liphezulu le-ANC kwezona zibalaseleyo kwimarike, amanqanaba ali-11 kuko konke okudingayo ukonwabela amava amnandi.
Ukwenza oku kucinywa kwengxolo okanye i-HearThrough, yenze isebenze ngokuthe ngqo kwi-app okanye ngokulula ngokuthinta ii-headphone ngokwazo. Ukuba neqhosha elibonakalayo kwii-headphone ngokwazo kuthintela ukungacacisi kwi-headset kwaye oku kuyatshintsha ukusuka kwenye indlela ukuya kwenye. I-negative ngu "cofa" oviwayo xa ucofa kuyo, kodwa ngokobuqu ndiyayixabisa kuba kumatyeli amaninzi xa ulungisa i-headset ngesizathu esithile ungabachukumisa ngempazamo
Umgangatho wesandi kwezi Jabra awunakuphikiswa
Siyavuma ukuba ukungahambelani kwe-aptX yinto abasebenzisi abaninzi abangayithandiyo kodwa ngenene ezi ntloko zinomtsalane ngokomgangatho wesandi ubingelela ngantoni. Ukongeza, kongezwe ukurhoxiswa kwengxolo elungileyo abayinikezelayo kunye nendlela yabo yokubonisa elubala, babonakala ngathi zii-headphone zomgangatho ongenakuphikiswa.
Yimodeli entsha leyo Kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba sifuna ii-headphone ezinikezela ngomgangatho wesandi iphakanyisiwe. Kule modeli yee-headphone ezinesiphelo esiphakamileyo asinakucinga ukuba ixabiso lalo liphezulu kwaye kwimeko yethu "ephezulu" isetelwe yi-AirPods Pro kwaye ngale ndlela iJabra ibiza kakhulu-ngaphandle kokuthathela ingqalelo izibonelelo ezinokubakho ezivela kwi-Pro- Kunendlebe ka-Apple.
Las ukhetho olwahlukileyo olunikezwe kuqwalaselo lweaudio kunye noseto olusuka kwiJabra Sound + app yakho iyafumaneka kwizixhobo iOS y Android yeyiphi yasimahla ngokupheleleyo, badibanisa kunye nokudibanisa ukhetho olukhoyo. Asizanga nokulwa noseto lweJabra Elite 85t kwaye useto lwefektri lulungile ngenene.
La umgangatho weaudiyo onomdla ukongeza ekurhoxisweni kwengxolo Benza ukuba babe yimbangi ephezulu yomgca kwi-AirPods Pro yanamhlanje.Sinokubacebisa ngokuqinisekileyo kubo bonke abasebenzisi abafuna amava omculo aphezulu.
Ixabiso elifanelekileyo leJabra Elite 85t yakho
Imibala, uluhlu kunye nexabiso leJabra Elite 85t
Singazifumana ezi ntloko kwiindlela ezahlukeneyo ezigqityiweyo. Eyethu yimodeli kwi Titanium emnyama Ukuthetha ngokobuqu ndicinga ukuba ngokuqinisekileyo lolona khetho lulungileyo, kodwa ngokokuthanda imibala eJabra kusinika ukhetho lokukhetha phakathi kwezi kunye noku: Mnyama, Copper Mnyama, Ngwevu kunye neGolide Beige.
Kufuneka iqatshelwe ukuba ibhokisi yezi headphone ineeshaja ezingenazingcingo kwaye zichanekile ngokufanelekileyo iyahambelana nazo zonke iitshaja eziqinisekisiweyo zeQi. Ukuba uphelelwe yibhetri, unokusebenzisa ngokulula nasiphi na isiseko sokutshaja onaso ekhaya okanye usebenzise ngqo intambo ye-USB-C eyongezwe kuzo.
Umthwalo abawunikelayo wanele usuku lokuzilolonga kakhulu kwaye uphele usuku. UJabra usixelela ukuba ubude bayo bumalunga neeyure ezisi-7 ukuba asisebenzisi kurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo kunye neyure enye kuncinci kwimeko yokuyisebenzisa. Ngokucacileyo oku kuyakuxhomekeka kubungakanani bokusetyenziswa kunye nezinye izinto, kodwa ngokuchanekileyo ichanekile. Sinokuhlawulisa iJabra ngokukhawuleza okukhulu kwaye kwimizuzu eli-15 baya kubonelela malunga neyure e-1 yokusetyenziswa Ixabiso li-euro ezingama-229 kwaye ngokusengqiqweni asijonganga neefowuni ezinokuthi zitshiphu. Oku kucinywa ngokucacileyo ngumgangatho wee-headphone kunye nesandi abanako ukusizisa. Imalunga ii-headphone eziphezulu.
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-5
IJabra Elite 85t
Apha ungathenga iJabra Elite 85t yakho
Umgangatho wesandi kunye nokukhethwa kohlengahlengiso kunye neapp
Izixhobo, uyilo kunye nebhokisi yemithwalo
Ixabiso elihlengahlengisiweyo kuthathelwa ingqalelo umgangatho walo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IJabra Elite 85t entsha yongeza ukurhoxiswa kwengxolo, uyilo, ukuzimela kunye nesandi esikhohlakeleyo
Ikhweshine yempangelo egcwaliswe nguSteve Jobs inyukela kwifandesi
Uyinyanzela njani ukuba uqalise kwakhona iMac nge-M1?